Maxay meydadka qaar ka mid ah farriimaha la soo helay u madhan yihiin? - DataNumen
Markii la isticmaalayo DataNumen Outlook Repair iyo DataNumen Exchange Recovery, mararka qaar waxaad arki kartaa meydadka fariimaha la soo helay oo madhan.
Waxaa jira sababo badan oo sababi doona dhibaatada:
1. Qaar ka mid ah barnaamijyada ka hortagga fayraska ayaa sababi kara dhibaatada. Tusaale ahaan, waxaan ka helnay warbixinno macaamiisha ah in Eset uu dhibka geysan doono.
Xalka: Kaliya iska jooji barnaamijka ka hortagga fayraska iskuna day dib u soo kabashada markale.
2. Haddii qaabka faylka PST loo soconayo uu ku jiro qaabkii hore ee Muuqaalka 97-2002, markaa maadaama qaabkii hore uu leeyahay xaddidaad cabirkeedu dhan yahay 2GB, mar kasta oo xogta la soo helo ay gaarto xadkaas, farriinta la soo helay waxay noqonaysaa mid madhan.
Xalka: U beddel qaabka faylka PST-ga aad ku socoto qaabka cusub ee Muuqaalka 2003-2019 halkii aad ka heli lahayd qaabkii hore ee Muuqaalka 97-2002. Qaabka cusubi ma laha xaddidaadda cabbirka 2GB sidaa darteed ayaa xallin doonta dhibaatada.
3. Haddii ishaada PST ama OST faylka si xun ayaa loo musuqmaasuqay oo xogta hay'adaha fariinta waa lost si joogto ah, markaa waxaad ku arki doontaa meydad madhan qaar ka mid ah fariimaha la soo ceshay.
Xalka: Maaddaama xogtu yihiin lost si joogto ah, ma jiraan siyaabo dib loogu soo celiyo iyaga mar dambe.
Waxaan qaabeeyaa darawalkayga. Weli miyaan soo kaban karaa xogtayda Muuqaalka?Waa maxay farqiga u dhexeeya DataNumen Outlook Repair iyo DataNumen Outlook Drive Recovery?